Sidoo kale, niman Ingiriiska dabadhilif u ahaa oo ku diirsaday jabka Daraawiish gaadhay gabayana ka mariyey ayuu sayidku si gaar ah u xujeeyey. Wuxuu gabayga ku qeexay inaan gumaysigu kala jeclayn Soomaali, Sayidka dagaalkooda heeganka u ah iyo kuwa u adeegana ay isugu mid yihiin, ujeedadiisuna ay tahay inuu dalka iyo dadkaba qabsado oo gumeeyo.
Sayidku wuxuu ku dacwiyey in maalinta isaga la waayo Soomaalina la waayi doono sidii dameerihiina afar tanag gumaysi ka dhookayn doono. Dhagarta iyo khayaanada gumaysiga ayuu si guud iyo si gaar ahba uga digay.
Wuxuu qeexay in uu isagu u xishay inuu gumaysiga dalka ka saaro, haddii uu maal iyo maamuus kale oo adduunyaad doonayana Ingiriis wax walba inuu diyaar ula ahaa ayuu xusuusiyey kuwii hadalka macno daradda ah usoo dhiibay. Wuxuu sheegay inuu ku dhiman doono jahaadka, diinta iyo koryeelidda kalimadda Alla.
Meerisyo gabaygan ka mid ah oo si kala duwan loo wariyey ayaa jira. Sidan aan halkan ugu soo gudbinay waxaa isugu dubariday Xaaji Cabdiraxmaan Sayid Maxamed iyo Xaaji Muuse Galaal. Meelaha qaarna meerisyo ayna nimankaasi helin ayaan soo raacinay. Wuxuu yidhi Sayidku:
 Meeriskani sida uu halkan ugu qoran yahay ayaa ugu rajaxan. Laakiin rag uu ka mid yahay Sheekh Jaamac Cumar Ciise waxay qabaan inuu meeriskani yahay: Dabatoobke Iidoor wuxuu, darayey caadhkiisa